परदेशीको डायरी :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
परदेशीको डायरी केतुस खतिवडा
नयाँवर्ष २०१३ पहिलो सप्ताहन्तमा म बाल्यकालको साथी राजकुमारलाई भेट्न अमेरिकाको उत्तर भर्मोन्टको ब्याटलबोरो सहर गएको थिएँ । बेलुकी खाना खाइसकेपछि उसले मलाई आफ्नो डायरी पढ्न दियो । मैले भेटेको उसको एक दिनको दैनिकी यस्तो रहेछ :
फेब्रुवरी १२, २०१२
आज निकै चिसो छ । मानिस जमेर मूर्ति नै बन्ला जस्तो । म बाहिर जान ढोका खोल्छु । एक भंगालो चिसो बाढी बनी भित्र पसेर न्यानो खोज्दै घुसि्रन खोज्छ । म हत्त न पत्त ढोका लाएर बाहिर निस्कन्छु । अनुहार खुल्लै देखेर होला, चिसोले नराम्ररी आक्रमण गर्छ म छाडो छल्न ज्याकेटको टोपी मिलाउँछु । चिसोले थाहा पाएछ क्यारे, मैले टाउजर नलाएको, त्यसैले ठिही जिन्सको पेन्ट छेडेर तिघ्रा र पिंडुलामा घोच्न थाल्छ सिस्नोले पोले जस्तै ।
बाटोमा हिउँ जमेर सिसाजस्तै भएको छ । म होसियार भएर नलड्ने कोसिस गर्छु । बल्ल बल्ल म गाडीको ढोकामा पुग्छु, गाडिमाथि आइसको बाक्लै लेप लागेको रहेछ, ढोका खुल्नै मानिरहेको छैन । जोडले तानेर ढोका खोलेर भित्र पस्छु र कक्रिदै सीटमा बस्छु । बर्षाको पानीले भिजेर ढाडिएको दाउरा नबले जस्तो गाडी पनि घ्यार्र-घ्यार्र मात्र गर्छ ।
निकैबेरको प्रयासपछि गाडी त स्टार्ट भयो । तर, अगाडि सिसामा झन् बाक्लो पानीको सिसा । करिब दश मिनेट फुल हिट चलाएपछि बल्ल सिसा केही तातेको जस्तो भयो । आफूलाई पनि यतिबेलासम्ममा केही राहत मिलेको अनुभव भइसकेको थियो । अनि बाहिर गएर पानीको सिसालाई टुक्रा टुक्रा पारेर फालिदिएँ ।
राति ढीला गरेर कामबाट फर्के पनि बिहान ढिलासम्म सुत्न मलाई मन पर्दैन । मनै पर्दैन भन्नुभन्दा पनि ढिलासम्म सुत्ने परिस्थिति नै मिलेको छैन । बिहान साढे सात बजे छोरोलाई स्कूल छाड्न उठेपछि फेरि फर्केर सुत्न मन लाग्दैन । बिहानको सयम मलाई सिर्जनशील लाग्छ, त्यसैले म अरु केही नगरे पनि सुतेर समय नष्ट गर्न चाहन्न । छोरोलाई स्कूल छाडेर अरु दिन जसरी नै म त्यतैबाट जीमतिर हानिन्छु ।
मुटु कमाउने चिसो हावाबाट जोगिन ज्याकेटको टोपी लगाउँदै हान्न आएको गोरुजस्तो टाउको निहुराएर अगाडि केही नहेरी एकैचोटि जीमखानाको ढोकामा पुगें । ढोका खोल्ने बित्तिकैको तातो हावाको स्पर्सले मैले तुरुन्तै न्यानो अनुभव गरिहालें ।
हिजो धेरैपछि नेपाली समाचार अनलाइनमा पढे, त्यो पनि हेडलाइनहरुमात्र । विदेशमा बसेर पनि राम्रो समाचार सुन्न कहिले पनि पाइएन । धेरै दुख लाग्यो । मन वर्षाको दिनलाई कालो मैलो बादल मडारिएर दिउँसै अँध्यारो बनाएजस्तै अँधेरिएर आयो । दिनभर मैले आफनो वरिपरि केही देखिँन जताततै शुन्यता मात्र देखें, जतात्यतै भयावह अत्यासै अत्यास मात्र देखें ।
आज पनि मलाई कताकता न्यास्रो लागिरहेको थियो, बिहानैदेखि । म मेरो मातृभूमि नेपाल फले फुलेको हेर्न र सुन्न मात्र चाहन्थें र चाहन्छु पनि । दुखको कुरा, मेरो त्यो सपना कहिल्यै पूरा भएन । मेरो मातृभूमि बारे म न कसैले नराम्रो कुरा गरेको सहन सक्छु, न देख्न नै । नेपालमा हुँदा पनि जहिले पनि म यही चिन्तामा डुबिरहेको हुन्थें, आफुले केही गर्न नसके पनि । सान्ति र सुशासनको अनुभव गर्न नेपालीको पुर्पूरोमा लेखेको रहेनछ जस्तो लाग्छ । म कुनै पनि नेपाली समाचार सुन्दिँन र पढ्दिन जसरी म ज्योतिषीको मा चिना या हात हेराउँदिन । ज्योतिषिकोमा गयो भने कि राम्रो भन्छ कि नराम्रो । राम्रो भने त केही छैन नराम्रो भनिदियो भने बन्न लागेका राम्रा कामहरु पनि चिन्ताले बिग्रने डर । नेपाली समाचार पनि त्यस्तै लाग्छ, राम्रो समाचार भए त ठिकै होला, नराम्रो रहेछ भने मन मात्रै दुख्छ । अनि त्यो दिनभर मूढ अफ । हुन त मेरो कुनै वाद, पार्टी, जाति, समुह, सरकार, प्रतिपक्ष कुनै एकातिर झुकाव भएको भए म त्यसको हारजीत या नराम्रो राम्रोले मात्र असर गथ्र्यो होला, तर म परे शुद्ध नेपाली, सम्पूर्ण नेपालीको भलो हेर्ने न कि कुनै पार्टी, दल, जनजाती, समुह, पक्ष प्रतिपक्ष आदि इत्यादि को ।
काउन्टरमा कहिले मोटी त कहिले पातली केटी बसेकी हुन्छे, सधंैजसो म हेलो हाई नगरी हिड्दिन्थें, आज मन गहुंगो भएकोले केहि नभनी सरासर अगाडि बढे, मोटी थिई कि पातली त्यो पनि थाहा पाइँन । मेरो आजको क्रियाकलाप देखेर हो कि किन हो त्यो काउन्टरकी केटी त मलाई नै पो हेरिरहेकी रहिछे । मैले भर्याङको अन्तिम खुडि्किलोबाट तल देखें । मलाई उसको हेराइले अलिकति पनि असर गरेन, म सरासर लक रुममा गएँ । झोला लक गरेर बाहिर ट्रेड मिलहरु भएको ठाउँमा आएँ । सरसर एउटा ट्रेडमिलमा गएँ र किताब पढ्दै बिस्तारै कुदें, हैन हिंडे । म ट्रेड मिलमा पढ्ने भएकाले हिँड्ने गरेको छु ।
मेरो मन आज कितावमा या शारीरिक अभ्यास केहिमा पनि अडिन मानेन ।
मलाई भित्रभित्रै के ले हो के ले, पोरिलिरह्यो । मेरो मातृभूमि सिकिस्त बिरामी भएर मृत्यू शैयामा छट्पटिरहेको धेरै भइसकेको छ । म उसैलाई सम्झेर भित्रभित्रै जलिरहेको छु । मेरो मनभरि अज्ञात भय मडारिइरहेको छ, आँखाभरि टम्म बादल लागिरहेको छ । अहिले मैले ट्रेड मिल छाडिसकेको छु र म माथिल्लो तलामा गएर बाहिर हेर्दै मन बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु । वरिपरि हेरें, सबै आ-आफ्नो शारीरिक अभ्यासमा ब्यस्त छन् । काला, गोरा, अमेरिकन, युरोयिन, अफि्रकन, एसियन, स्पेनिस, युवा युवती, बुढाबूढी, कसैलाई कसैको मतलव भएजस्तो लाग्दैन, आफ्नो मातृभूमिको या परिवारको ।
बाहिर पार्किङ लटमा २०/२५ वटा गाडीहरु पार्किङ गरिराखेका छन् । मानिसहरु आउने र जाने पनि गरिरहेका छन् । ठाउँ ठाउँमा बिहानको कलिलो घाममा हिँउ टल्किरहेको छ । सिसाबाट छिरेको घामको तातोका आधारमा म बाहिरको चिसोको अनुमान लगाउन खोज्छु । पक्का पनि बाहिर घामले न्यानो बिछ्याइसक्यो होलाजस्तो देखिन्छ, तर छैन ।
सबैलाई चटारो छ, । कोही हतार-हतार आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न अगाडि बढिरहेका छन् । कोही पुगिसके होलान् । एक जना मानिस रेलको ट्रयाक छेउमा हिउँ पन्छाउँदैछ । एकै छिनमा अरु ९/१० जना भेला हुन्छन्, सबैले सेफ्टी ह्याट र सेफ्टी ज्याकेट लगाएका छन् । तीमध्ये एउटाले हातको इसारा गर्दै बोलिरहेको छ, उसको हातमा एउटा फाइल पनि छ । घरि घरि उ बाहिर काम गर्ने ठाउँतिर पनि देखाइरहेको छ । त्यो पक्का पनि काम थाल्नुअघिको मिटिङ हो र हातमा फाइल बोक्ने सुपरभाइजर हो ।
म केहि अघिमात्र आफुले बाहिर अनुभव गरेको चिसो सम्झन्छु, आफैंलाई आत्मग्लानी हुन्छ । आफुलाई उनीहरुका अगाडि निरीह देख्छु । म एकछिन बाहिर बस्न सक्तिँन उनीहरु त काम गर्न थालिसके ।
लाग्छ, आफ्नेा मातृभुमि बनाउन धर्तीबासीहरुले रगत र पसीनामात्र हैन, पर्‍यो भने ज्यान पनि दिनुपर्छ । धन्य तिनीहरुलाई, जसले वर्षौं वर्ष रगत र पसीना मात्र बगाएर हैन, कतिले ज्यानकै आहुति दिएर अमेरिका बनाइदिए हाम्रा लागि ।
हामी पनि नेपाल आमा भनेर उच्च स्थान दिन्छौं । हामी सबैलाई थाहा छ “जननी जन्म भूमिश्च : स्वर्गदपि गरियसि” । तर, पनि हामी किन धर्ती माताको इज्जत र सम्मान गर्न सक्दैनौं ? किन एकै धर्तीमा बस्ने हामी आपसमा वैमनस्यता साँधेर आफू आफू नै मारकाट गरिरहन्छौं ? किन हामी अरुको कुभलोमात्र सोचिरहन्छौं ? किन हामी अरुभन्दा आफुमात्र जान्ने हुनखोज्छौं ? किन हामी अरुको खुट्टा तानेरमात्र अघि बढ्न खोज्छौं । संसार कहाँबाट कहाबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहिलेसम्म यसरी अल्झिरहने हो ?
राजनीतिलाई राज्यको मुटु, मेरुदन्ड, प्राण, जीवन जे भने पनि हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुले जबसम्म निस्वार्थ भएर काम गर्दैनन् तबसम्म देश विकास वा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । नेपाल माताले धेरै सपुतहरुलाई जन्म दिइन् र थोरै कपुतहरुलाई पनि । विभिन्न समयमा विभिन्न रुपले लिएर सपुतहरु अगाडि बढे पनि कपूतहरु पनि संगसंगै भएकाले कपुतहरुले सपुतहरुको खुट्टा काटिरहे । सपुतहरु धर्तीमाताको सेवा र धर्तीवासीलाई सुशासन दिन खोज्छन् तर कपुतहरु अझ अगाडि बढेर सपुतहरुको दोहोलो काढ्छन् । हुँदाहुँदा अब त नेपाल आमाले सपुतहरु जन्माउनै छाडेजस्तो लाग्न थालिसकेको छ । सपुत जन्माए नै पनि नेपाल आमाले आफ्नो हैन उनीहरुकै मात्र रक्षा हुने गरी कतै सुरक्षिततवरले लुकाएर राख्छिन् होला ।
अब त नेपाल आमाको हाडछाला मात्रै छ, बाँकी सबै दुष्टहरुले खाइसकें । गिद्धले सिनो लुछेझंै हाम्री धर्तीमाताको शरीर लुछिरहँदा पनि हामी चुप लागेर बसिरहेका छौँ । किनकि हामीमध्ये कोहीले उनीहरुले फालेको हड्डी चुस्न पाइरहेका छौं । अनि बाँकी हामीलाई हड्डी चुस्ने कुकुरहरुले ङ्यार्र गरेर टाढा टाढा भगाइदिन्छन् ।
बडो गजव छ, यहाँ, एउटा आउँछ, नेपाल आमा र उनका सन्तानलाई सुशासन दिन्छु । आर्थिक सामाजिक, न्यायिक, सैक्षिक सबै क्षेत्रमा विकास गर्छु, भन्छ । अनि सुरु गर्छन् उ र उसका मतियार भएर नेपाल आमा र उनका सन्तानलाई चरम यातना दिन । कानुन आफ्नै हातमा लिन्छन्, त्यसैले अपराधीलाई आफैं छुटाउँछन्, गुण्डा आफैं पाल्छन् अनि सीधासाधा जनतालाई दण्ड सजाय गर्छन् । राष्ट्रको सम्पतिको आपसमा बाँडचूड गर्छन् । भोग विलास गर्छन् । यो देखेर अरुलाई जलन हुन्छ अनि सिनोको स्याललाई जस्तो वरिपरिबाट जिस्क्याउन थाल्छन् । सकेसम्म स्यालले सिनोमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोज्छ केही लागेन भने लौ तिमेरु खाओ भनेर छाडी दिन्छ अझ सकेसम्म फेरि आफ्नो पालो पाउने सर्तमा ।
पर, कतै पाखामा अग्लो ईटाको चिम्नीबाट धुँवाको मुस्लो मडारिँदै ममाथि आकाशतिर गइरहेको छ । मैले अझ गहिरिएर त्यस धुँवाको मुस्लोभित्र हेरें । त्यहाँ मेरो मातृभूमि नेपाल धुँवाको मुस्लोभित्र निसास्सिरहेको देखें । त्यही निसास्सिरहेको मातृभूमिभन्दा अलिकति पर मैले आफुलाई देखें । अझै पनि त्यहाँभित्र कोही मानिसहरु आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नको शान्ति र संविधानको बहानामा नेपाल आमाको छातीमा आगो बालिरहेका थिए । म आफु बाहिर भए पनि मातृभुमि निसास्एिको देखेर मेरो मन रोयो ।
ड्याङ्ग ! ठूलो आवाज आयो, कसैले ह्याभी वेट अग्लोबाट झारेछ । मेरो सोचाई भङ्ग भयो । म आफैँलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, यत्रोबेर केही नदेखी केके सम्झेर टोलाएँछु । को को नयाँ नयाँ अनुहारहरु पनि आइसकेछन् । म आफैं छक्क परें । कहाँबाट आज यस्तो सोचाइ आयो । यो सब भ्रम मात्र हो, मैले यहाँबाट सम्झेर के नै हुने हो र । फेरि यो संसारमा मेरो भन्नु नै के छ र नेपाललाई आमा र धर्तीमाता भन्नेहरु त कति होलान् कति । नेपाल आमालाई हामीजस्ता परदेशीको के माया होला र ? आखिर मैले के लिएर आएको थिएँ र मरो भन्नु । म खाली आएको थिएँ, खाली जान्छु, मात्र भ्रममा मेरो भन्छु । भगवान भन्नेहरुले त केहि लगेनन् ।
साँच्चै म एक छिन भ्रममा हराएकोमा आफैंदेखि हाँसो उठ्यो । फिस्स फुका हाँसो हाँसें कसैले देखे देखेनन् त्यसको मतलव पनि गरिन अनि लागें फेरि शारीरिक अभ्यासतिर ।
3 Comments on “परदेशीको डायरी”
With Love From Desert wrote on 23 February, 2013, 7:38
Planned writing…..Writer is deemed by his own perception..
krishna timilsina wrote on 23 February, 2013, 8:55
वास्तबमा मलाई यो लेख ज्यादै मन पर्यो सायद मा पनि पर्देसी भएको र त्यसमा पनि मा जस्तो देश प्रतिको चिन्तन गरिरहन्थ्य त्यो संग सायद मेल खयर होला भन्नु पर्छ/ जति हामी विदेश मा बसेर चिसो दिमागले सोचिरहेका हुन्छौ आफ्नो कामको पनि ख्याल नगरी त्यसरी नै यी पाजी नेताले सोच्न भ्याउने भय अथवा सोची दिने हो भने अवस्य पनि हाम्री धर्तिमाताले यो घडी मा यसरि आँसु झर्नु सायद पर्दैनथ्यो होला/ आफु नायक बन्ने चक्करमा यो सोच्दैनन् कि धर्तिमताको आसु हामीले पुछ्नु पर्छ बाधा अड्चन हाल्नु हुन्न भनेर/ मात्र यो सोच छ कि कोरी नेताको त्यसले यो समस्याको समाधान गर्यो भने हिरो हुन्छ मा पछि पर्छु कसरि हुन्छ त्यसको बिपक्छ्य मा मान्छे उतार्नु छ भनेर लाग्छन कतिलाई त पैसा खुवाएर पनि उतार्छन त कतिलाई प्रलोवन देखाएर/ कोहि पनि बेक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर हेर्दैन जसले गर्दा आज हाम्री धर्तिमाताले आसु बगाएर रुनु परेको छ कोहि छौ कि मेरो मर्का बुज्ने भनेर कोहोलो हाल्दै अरुको सामु घुंडा टेक्नु परेको छ /
pushpa bhujel wrote on 23 February, 2013, 21:56
Malai sharai man paryo.